Golaha Guud ee UNWTO hadda ee Madrid: Zurab Pololikashvili waa garaad. Sacuudiga ma ka falcelin doonaa?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Golaha Guud ee UNWTO hadda ee Madrid: Zurab Pololikashvili waa garaad. Sacuudiga ma ka falcelin doonaa?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Shirarka • Moroko News • News • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Khamriga & Ruuxa
Dhageystayaasha ka qeyb galaya shirweynaha guud ee UNWTO ee soo socda ayaa maanta ka soo wareegay wasiiro safaarado ama bandhig la’aan, markaasoo goobtu ay ka soo wareegtay Morocco una guurtay Spain.
Tani waa war wanaagsan oo loogu talagalay Xoghayaha Guud ee Zurab Pololikashvili, laakiin war xun u ah dalxiiska adduunka.
Sacuudi Carabiya ma caawin kartaa?
Sida saadaaliyay eTurboNews iyo dadka u dhuun daloola, maanta UNWTO waxay si rasmi ah u shaacisay.
Golaha Guud ee loo qorsheeyay Marrakesh, Morocco laga bilaabo Noofambar 30 ilaa Diseembar 02 wuxuu noqon doonaa dhul saaxiibtinimo badan, Madrid, Spain
Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili wuxuu u adeegsaday saameyntiisa Madrid ee la yaqaan si uu wax uga qabto. Lahaanshaha Golaha Guud ee la yaabka leh ee Madrid ayaa dabooli doona khiyaanadiisa doorashada, waa inuu rajayn.
Tan iyo markii Zurab Pololikashvili oo u dhashay Georgia uu qabtay hoggaanka Ururka Dalxiiska Adduunka Janaayo 1, 2018, ururku wuxuu noqday mid warbaahinta ka soo horjeeda. UNWTO waxay ka laabatay urur daah-furnaan ah oo ay isu beddeshay god ay ku jiraan dhagar, siro, iyo aamusnaan. Cabsida shaqooyinka ayaa lagu xukumay gudaha Xarunta UNWTO ee Madrid, Spain.
Iyadoo la tacaalaysa dhibaatadii ugu waynayd ee dunidan soo marta taariikhda casriga ah, UNWTO waxay noqotay mid aan waxba ka qabanayn, shaqayn wayday, marka laga reebo marka ay ka faa'iidaysato shakhsi ahaan Xoghayaha Guud.
COVID-19 aad buu u weynaa, UNWTO waxay u baxsatay dhiirrigelinta khamriga-dalxiiska.
Suxufiyiintu waxay ku sugayeen bannaanka xafiiska UNWTO ee Suuqa Socdaalka Adduunka sannadihii 2018 iyo 2019 oo keliya in loo sheego in Xoghayaha Guud aanu awoodin inuu ka qayb galo shirkiisii ​​jaraa’id.
Shirkii Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada ee 2019 COP 2019 Madrid, Xoghayaha Guud ee UNWTO wuxuu jeclaa fursadda sawirka ee madaxweynayaasha laakiin wuxuu ka soo qaaday goobta isagoo degdeg ah si uu uga fogaado wax kasta oo su'aalo ah oo warbaahin ah ama kaqeybgalka kale ee munaasabadda.
Shirka soo socda ee 2021 ee Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada ee COP 2021 ee Glasgow dabayaaqada bishan, Xoghayaha Guud waa inuu muujiyaa weji. Wuxuu u baahan yahay inuu ku qanciyo dalalka inay dib ugu xaqiijiyaan inuu yahay Xoghayaha Guud ee Golaha Guud.
Suuqa Safarka Adduunka ee soo socda (WTM) 2021, Xoghayaha Guud waxa uu ka soo qaybgeli doonaa shaxda Wasaaradda. Tani waxay dantiisa ku jirtaa dhowr toddobaadyo ka hor intaan la xaqiijin. Waxa la sugayaa in uu saxafiyiinta la kulmo shir jaraa’id. Martiqaad noocaas ah lama helin eTurboNews weli.
Wuxuu u baahan yahay inuu u muuqdo mid si macno leh ugu hawlan. Sidaa darteed waxa uu riixayaa in PR istaago si uu u hogaamiyo ku dhawaaqida COP 2021.
Dib-u-xaqiijintiisii ​​Golaha Guud bishii Nofembar ka dib markii Golaha Fulinta ee UNWTO uu dib u doortay bishii Jannaayo kaliya ayaa Zurab u noqotay mid aad u fudud.
Lahaanshaha Golaha Guud ee Madrid waa waxa Zurab rabay oo dhan. Pololikashvili waa in loogu hambalyeeyaa sida garaadka siyaasadeed ee aad u wanaagsan.
Si fudud ayaa loo saadaalin karaa in ka dib markii uu ku guulaysto dhageysiga xaqiijinta ee golaha Madrid, ganacsiga UNWTO uu si caadi ah ugu soo noqon doono isaga.
Caadiga macnihiisu waa aamusnaan, ka -qaybgal macno leh, hoggaan quseeya.
Waxay la macno tahay in laga fogaado iskaashiga WTTC iyo warshadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay, iyadoo la iska indha tirayo arrimaha COVID-19, iyo in si joogto ah diiradda loo saaro hamigiisa siyaasadeed ee ah inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Georgia.
Dowladda Marooko ayaa maanta u soo gurmatay sidii ay u baajin lahayd shirweynihii guud ee magaalada Marrakesh.
Tan waxaa saadaaliyay eTurboNews iyo ilo xog ogaal ah in muddo ah.
Ogeysiis Verbale ah ayaa loo qaybiyay wadamada xubnaha ka ah UNWTO maanta (Oct 23,2021)
Xoghaynta Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) waxay u soo jeedinaysaa bogaadinteeda Xubinta Ururka waxayna sharaf u leedahay inay ku wargeliso, warqad ku taariikhaysan 15 Oktoobar oo ka soo gaadhay Xoghaynta UNWTO 18kii Oktoobar 2021, dawladda Morocco waxay la socodsiisay Xoghaynta in isbeddelka xaaladda hadda jirta ee caalamiga ah ee la xiriirta masiibada COVID-19 aysan u oggolaanaynin qabashada kalfadhiga 24aad ee Golaha Guud ee Marrakesh sanadka 2021 taariikhaha lagu heshiiyay 30ka Nofeembar-3 Diseembar xaaladahaas dammaanad qaadka ah xaaladaha caafimaad ee lagama maarmaanka u ah ka qaybgalayaasha.
Xoghayntu waxay jeclayd in la xasuusto in kalfadhiga 24-aad ee golaha loo dhan yahay la kulmo sanadka 2021 sida uu golaha guud ku go’aamiyay qaraarka tirsigiisu yahay 727 (XXIII) ee kalfadhiga 23aad, si waafaqsan qodobka 10-aad ee xeer hoosaadka iyo xeerka 1.1 ee xeer hoosaadka. ee Golaha Guud.
Iyada oo la raacayo awoodda loo igmaday ee hoos timaada Xeerarka xulashada goobaha shirarka Golaha Guud ee uu ansixiyay Golaha Guud iyada oo loo marayo xallinta 631 (XX), iyada oo la eegayo dammaanad qaadka sii wadida hawlaha Ururka ee biennium 2022-2023 iyo shaqada saxda ah ee Xubnaheeda iyadoo la raacayo Xeerarka, iyo ka dib markii la tashaday Guddoomiyaha Golaha Fulinta iyo Dowladda Spain, Xoghayntu waxay ku faraxsan tahay in ay ku wargeliso in kalfadhiga 24aad ee Golaha Guud lagu qaban doono Madrid. Spain, Xarunta Dhexe ee Ururka, isla taariikhaha lagu wargeliyay dhammaan Xubnaha Ururada, ie 30 Noofambar ilaa 3 Diseembar 2021. Xoghayntu waxay si dhakhso ah u siin doontaa dhammaan Dawladaha xubnaha ka ah macluumaadka la xidhiidha fadhiga.
Xoghaynta Ururka Dalxiiska Adduunka ayaa ka faa'iidaysata fursadan si ay ugu cusboonaysiiso Dawladaha xubnaha ka ah dammaanad qaadka tixgelinta ugu sareysa.
Madrid, 23 Oktoobar 2021